30ka Ganacsiga Ecommerce ee ugu Fiican Hindiya Meheradaha 2022
Bogga ugu weyn 30 Ganacsiga Ganacsi ee ugu Fiican Hindiya 2022
30 Ganacsiga Ganacsi ee ugu Fiican Hindiya 2022
Hindiya gudaheeda, ganacsiga elektaroonigga ah ayaa beddelay sida dadku u ganacsadaan. Laga soo bilaabo US $ 38.5 bilyan sanadkii 2017, waaxda ganacsiga e-commerce ee Hindiya waxaa la saadaalinayaa inay ku fiddo $ 200 bilyan marka la gaaro 2026.
Laga bilaabo May 2020, Hindiya waxay lahayd 696.77 milyan oo adeegsadeyaal Internet ah, oo u dhiganta qiyaastii 40% dadweynaha.
Kordhintaas internetka iyo isticmaalka taleefannada casriga ah ayaa kicisay inta badan kobaca warshadaha.
Barnaamijka 'Digital India' ayaa la filayaa inuu ballaariyo tirada isku -xirnaanta internetka ee Hindiya illaa 776.45 milyan marka la gaaro Sebtember 2020. 61 boqolkiiba dhammaan isku -xirnaanta internetka ayaa laga sameeyay meelaha magaalooyinka waaweyn ah, iyadoo 97 boqolkiiba xiriiradaas ay ahaayeen wireless.
Tirooyinkan ayaa ku siin doona dhiirigelinta aad u baahan tahay si aad u bilowdo ganacsi eCommerce kuu gaar ah gudaha Hindiya. Sii wad, oo yaa garan kara waxa dhici kara? Waxaa laga yaabaa inaad dhisi karto 'Alibaba' xiga.
Marka, dhammaantiin ma diyaarsan tihiin? Waa kuwan meheradaha ugu wanaagsan eCommerce -ka Hindiya.
Waa maxay ganacsiga eCommerce oo dhan?
eCommerce, oo inta badan loo yaqaanno ganacsiga elektaroonigga ah ama ganacsiga onlaynka ah, waa iibsashada iyo iibinta badeecadaha iyo adeegyada iyada oo loo marayo internetka, iyo sidoo kale wareejinta maaliyadeed iyo xogta loo baahan yahay si loo dhammaystiro macaamilkan.
eCommerce waxaa inta badan loo adeegsadaa tixraaca iibinta tooska ah ee alaabada dhabta ah, laakiin waxay kaloo tixraaci kartaa nooc kasta oo macaamil dhaqaale oo ay suuragalisay internetku.
Dukaamaysiga onlaynka ah, oo lagu qeexay iibinta iyo iibinta alaabta intarneedka aalad kasta, ayaa ah tusaalaha ugu caansan eCommerce.
eCommerce, dhanka kale, waxay koobi kartaa hawlo badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan xaraashyada onlaynka ah, albaabada lacag bixinta, tigidhada onlaynka ah, iyo bangiyada internetka.
Haddii aad rabto inaad abuurto ganacsi e-commerce ama aad hore u lahayd oo aad rabto inaad waxbadan ka ogaato warshadaha si aad u hagaajiso qaabkaaga ganacsi, maqaalkani wuu ku caawin doonaa.
Waxay ku siineysaa dhammaan aasaaska e-commerce ee lagama maarmaanka ah iyo sidoo kale fikradaha ganacsi e-commerce ee kala duwan ee Hindiya.
Maxay yihiin Noocyada Ganacsiga eCommerce?
Waxaa jira afar nooc oo eCommerce aasaasi ah oo loo isticmaali karo in lagu macneeyo ficil kasta oo macaamil ganacsi oo u dhexeeya macaamiisha iyo ganacsiyada. Waxaa ka mid ah B2B, B2C, C2C, iyo C2B.
Moodooyinkan ganacsi waa, guud ahaan, sida soo socota:
1. Ganacsi Ganacsi (B2B)
Ganacsiga ilaa ganacsiga (B2B) waa qaab ganacsi oo diiradda saaraya iibinta badeecadaha hal shirkad ilaa shirkad kale.
Warshado badan ayaa ku saleysan qaabkan: shirkadaha softiweerku waxay u horumariyaan barnaamijyo ganacsiyada kale, halka shirkadaha saadka ay ka caawiyaan ganacsiyada dhoofinta alaabtooda.
Markay macaamiishu si aad u badan wax u iibsadaan, inta badan shirkadaha B2B waxay bixiyaan sicir -dhimis unug kasta, taas oo dhiirigelin cajiib ah u ah xafiisyada si ay uga faa'iidaystaan.
2. Ganacsiga Macaamilka (B2C)
Iibinta B2C waxay tixraacaysaa tusmada tafaariiqda caadiga ah oo ay shirkaduhu si toos ah macaamiisha uga iibiyaan alaabta ama adeegyada.
Habka ganacsi ee ugu caansan ayaa ah marka ganacsatadu ka iibiso macaamiisha iibsata badeecad xaddidan.
Dukaammada waawayn waa tusaale caan ah oo ah nooca B2C, halkaas oo macaamiishu ay iibsadaan raashinkooda asbuuc walba halkii ay ka ahaan lahaayeen kuwa badan.
Tani waa nooc ka mid ah ganacsiga eCommerce ee Hindiya
Akhri: Dib -u -eegista AliExpress 2022: Ma Xalaalbaa Mise Dukaan Online
3. Macaamilka Macaamilka (C2C)
Is -weydaarsiga Macaamiisha ee Macaamilka (C2C) wuxuu ku salaysan yahay dadka isticmaala suuq si ay wax uga ganacsadaan, wax u iibsadaan, waxna u iibiyaan si ay ugu beddelaan guddi yar oo goobta la siiyay.
Tusaale ahaan, waxaad u guureysaa magaalo cusub oo leh alaab iyo qalab kale oo elektiroonig ah oo aadan qaadi karin. Waxaad alaabadaas u iibisay suuqyada oo waxaad ka heshay iibsadeyaal doonaya inay bixiyaan qiimaha aad dejisay.
Tani waxay noqon kartaa mid fudud oo faa iido leh markaad isticmaaleyso suuqyada sida eBay iyo Craigslist si aad u iibiso alaab aadan u baahnayn.
4. Macaamilka Ganacsiga (C2B):
Macaamilka Ganacsiga (C2B) waa qaab ganacsi oo qof kasta oo xirfadle ah ama xirfadle ah uu ka faa'iideysto khibradooda si uu ugu gudbiyo awooddooda adeeg ahaan ganacsiyada kala duwan.
Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu badan ee macaamilka u ah barmaamijka shirkadda ayaa ah iskii u shaqaysi.
Goobaha suuqyada sida Fiverr, freelancer, iyo UpWork, xirfadlayaal leh xirfad balaaran oo lagu diyaariyey goobo iyo warshado kala duwan ayaa xaraasha adeegyadooda.
Waa maxay sababta looga bilaabayo Ganacsiga eCommerce -ka Hindiya?
Hindiya waxay ku faantaa inay tahay mid ka mid ah hab -nololeedka ugu wanaagsan ee bilowga adduunka, iyada oo ay jiraan durdurro joogto ah oo shirkado hal -abuur leh iyo badeecooyin cusub oo daadad ku haya suuqa.
Liiska ganacsiyada unicorn -ka ayaa sii kordhaya iyadoo shirkado cusub ay ku soo biireen safka.
Markii laba arday oo ka qalin-jabiyay Dugsiga Ganacsiga Harvard, Avnish Bajaj iyo Suvir Sujan, ay go'aansadeen inay sahamiyaan aagga suuqa e-commerce ee Hindiya, odyssey-ka ganacsiga e-commerce ee Hindiya ayaa bilaabmay.
Waxay ka faa’ideysteen fursadda oo waxay bilaabeen Baazee.com, oo ah goob xaraash online ah oo loo ekeysiiyay eBay. Later, heshiis 55 milyan oo doolar ah, eBay waxay iibsatay shirkadda.
Markay dhammaantood u maleeyeen inay tani dhammaatay, 2007, laba IIT Delhi grads iyo shaqaalihii hore ee Amazon, Sachin Bansal iyo Binny Bansal waxay Flipkart u bilaabeen sidii dukaan buugaag online ah. Waxay si dhakhso leh ugu fidday qaybaha kale ee internetka waxayna noqotay suuqa ugu weyn e-commerce ee Hindiya.
Walmart waxay Flipkart ku bixisay $ 16 bilyan sannadka 2018, taasoo ka dhigaysa iibsiga ugu weyn e-commerce ee adduunka.
Waxaas oo dhan, waxaan dhihi karnaa, gudaha nidaamka deegaanka ee Hindiya, waxaa jira wax badan oo socda, iyadoo ay sii kordhayaan shirkadaha soo jiidaya maalgashadayaasha ugu sarreeya adduunka.
Sidoo kale, in yar oo ka mid ah waxay la kulmaan dhibaatooyin dhaqaale waxayna ku adag tahay inay ku sii nagaadaan meheraddan tartanka.
Ganacsiga e-commerce wuxuu helayaa rajo cusub iyadoo dalabku sii kordhayo, iyo sidoo kale awooda iyo helitaanka iibsiga internetka.
Ganacsiga eCommerce faa'iido ma ku leeyahay Hindiya?
In kasta oo xaqiiqda ah in eCommerce -ka Hindiya uu kobcayo, Flipkart iyo Amazon midna faa'iido ma leh.
Adeegyada iibiyaha Amazon waxay hoos u dhigeen hoos u dhaca INR 5,685 Cr sanad maaliyadeedka dhammaaday 31 -ka Maarso, 2019, sida ku cad waraaqaha ay heleen portal sirdoonka ganacsiga Tofler.
Khasaaraha hadda jira wuxuu hoos uga dhacay 9.5 boqolkiiba sanad maaliyadeedkii hore markii Amazon ay lumisay INR 6,287.9 ​​Cr. Khasaaraha eCommerce-ka ee Hindiya ee FY 18-19 wuxuu ka badnaa INR 7000 Cr.
Shirkadda Amazon India ee B2B, Amazon Wholesale India, ayaa iyaduna la kulantay dib -u -dhac, kaliya maahan khasaare laakiin sidoo kale xagga dakhliga.
In kasta oo iibku hoos u dhacay 8% sannad-maaliyadeedka hore oo uu noqday INR 11,250 Cr, khasaaraha ayaa kordhay INR 141 Cr ee FY18-19.
Tani waxay muujinaysaa uun, in kasta oo ay ka mid tahay shirkadaha ugu caansan dunida oo ay shaqaalaysiiso qaar ka mid ah injineerada iyo xirfadlayaasha adduunka ugu qaalisan uguna qaalisan, haddana Amazon waxay ku guuldarraysatay inay ka macaashto suuqa Hindiya.
Si kastaba ha noqotee, suuqa raashinka internetka ee Hindiya ayaa la filayaa inuu ku koro CAGR oo ah 57% laga bilaabo $ 1.9 bilyan sanadka 2019 illaa $ 18.2 bilyan sanadka 2024.
Sidoo kale, rubuca afaraad ee 2020, amarrada e-commerce ee Hindiya mugga ayaa kor u kacay 36%, iyadoo daryeelka shaqsiyeed, quruxda, iyo fayoobaanta (PCB & W) ay aad uga faa'iideystaan.
Suuqa ganacsiga E-commerce ee Hindiya ayaa la saadaalinayaa inuu ku kici doono $ 200 bilyan marka la gaaro 2026, laga bilaabo US $ 38.5 bilyan sanadkii 2017, taas oo ay ugu wacan tahay kor u qaadista gelitaanka taleefannada casriga ah, sii-deynta shabakadaha 4G, iyo kordhinta hantida macaamiisha.
Flipkart, Amazon India, iyo Paytm Mall ayaa la saadaalinayaa inay hogaamiyaan iibinta tafaariiqda tooska ah ee Hindiya, kuwaas oo la saadaalinayo inay kordhaan 31% ilaa US $ 32.70 bilyan sanadka 2018.
Taasi waa rajo sare oo ah in ganacsiga e-commerce uu hubaal ka noqon doono faa iido India sanadaha soo socda.
Immisa ayee ku kacaysaa in laga bilaabo meheradda eCommerce -ka Hindiya?
Aynu nidhaahno waxaad tahay aabbe guriga-joog ah oo doonaya inuu suuq-geyn fikradahaaga dharka qabow ee internetka ah ama hooyo khiyaano badan oo guriga ku samayn kara xoogaa farsamooyin gacmeedyo cajiib ah.
Hadda waxaad dooneysaa inaad furato dukaan onlayn ah si aad "uga dhex gasho sheygan eCommerce," "ka kasbato xoogaa lacag dheeri ah," ama "kasbato xoogaa dakhli dheeri ah markaad seexato."
Waa kuwan wax walba oo aad u baahan tahay si aad u bilowdo.
Waxaan go aansaday inaan waqti ku bixiyo inaan dejiyo kharashaadka lagu bilaabayo ganacsiga eCommerce -ka yar ee Hindiya.
Product Kharashka Bilowga
Isku -darka Shirkadda (MOA, AOA, Kaarka PAN, Hay'adda Sharciga ee Shirkadda, Koontada Bangiga) Rs 50,000 (Bangalore)
Albaabka Lacag -bixinta (Si aad u aqbasho kaarka deynta, bangiga saafiga ah ama kaarka deynta intarneedka) Rs. 25,000 (khidmadda bilowga) 2 - 4% khidmadda macaamilka (laga gorgortami karo) Rs. 500 - Rs. 1500 bishiiba (waa laga dhaafi karaa tan)
Software eCommerce 1000 ilaa Rs. 10,000 bishii billowga
kooxda eCommerce (Waa ikhtiyaari haddii aad isticmaasho softiweer ka-baxsan shelf) Rs. 1.5 ilaa Rs. 2.5 Lakh bishii
Kombiyuutar, mashiinno, adeegyo loogu talagalay soo -saareyaasha (haddii aad dhiseyso koox) Rs. 50,000 + Rs 10,000 bishiiba martigalinta (qorshaha aasaasiga ah)
Goobta Xafiiska (haddii aad haysato koox doonaysa inay ka shaqayso xafiis) Rs. 5000 bishii
Shipping Rs. 20,000 (koontada dejinta, laga gorgortami karo eber) + Rs. 25 ilaa Rs. 45 shixnad kasta (ilaa 500 garaam oo culeys ah)
Suuqgeyn bilow ah Caadi ahaan eber, laakiin miisaaniyad Rs. 20,000
Kombiyuutar (Desktop ama Laptop) + Internet + Taleefan Rs. 30,000 + Rs. 2000 bishii (oo ah xiriir internet oo wanaagsan)
Wadarta kharashyada bilowga Ugu Yar: Rs. 1 Lakh oo lagu daray Rs. 25,000 bishii (iyadoo la adeegsanayo softiweerka gaadhiga wax iibsiga ee la martigeliyay)
Ugu badnaan: Rs. 4-5 Lakhs oo lagu daray Rs. 2 Lakhs bishii (dhisida koox iyo martigalinta naftaada)
Waa kuwee eCommerce -ka ugu Fiican Hindiya? 30 Ganacsiga ugu Fiican eCommerce -ka Hindiya 2022
Dhaqaalaha Hindiya ayaa si weyn uga faa'iideystay eCommerce.
Sannadkii 2018, shirkadaha Ecommerce -ka ee Hindiya waxay heleen wadar ka badan $ 7 bilyan oo raasumaal ah.
Hindiya, waxaa jira in ka badan 19,000 oo ah meheradaha e-commerce, halka Mareykanka, ay ku jiraan in ka badan 28,000 shirkado e-commerce ah.
Aynu eegno 30-ka shirkadood ee ugu wanaagsan e-commerce ee Hindiya, oo ay la socdaan macluumaadka xiriirka.
Flipkart waa mareeg ku iibisa alaabta internetka. Waa tafaariiqle online ah oo Hindi ah oo xaruntiisu tahay Bengaluru, Karnataka.
Flipkart waxay shaqaalaysiisaa 21933 qof waxayna dakhli ka soo gasho $ 2,896 milyan. Waxaa la aasaasay 2007.
Asal ahaan, Flipkart waa shirkad ku takhasustay iibsashada khadka tooska ah waana shirkad gaar loo leeyahay. Ka dib macaamil lacageed oo dhan 16 bilyan oo doollar 2018, Walmart Inc hadda waxay leedahay Flipkart.
Amazon waa tafaariiqle online ah oo Mareykan ah oo xaruntiisu tahay Seattle, Washington. Waxaa la aasaasay 1994.
Waxay noqotay hogaamiyaha adduunka ee aan laga doodin ee ganacsiga elektaroonigga ah, isagoo ku koray dalal badan, oo ay ku jirto Hindiya, wuxuuna ku sii koray tafaariiqda leben-iyo-hoobiye iyadoo la helay Suuqa Cuntada oo Dhan, iyo sidoo kale daabacaadda, elektiroonigga, xisaabinta daruuraha, qulqulka fiidiyaha, iyo soosaarka.
Waqtigan xaadirka ah, Amazon waxay shaqaaleysiisaa 334555 qof waxayna dakhli ka soo gasho $ 3,393 milyan.
Asal ahaan, Amazon waa shirkad ku takhasustay dukaamaysiga khadka tooska ah iyo iibsashada cuntada onlaynka ah waana shirkad ay dadweynuhu ka ganacsadaan.
IndiaMart waa madal B2B onlayn ah oo loogu talagalay ganacsiyada Hindida oo la aasaasay 1999.
Iyada oo u tartameysa Alibaba, waxay u oggolaaneysaa soo -saarayaasha, alaab -qeybiyeyaasha, iyo dhoofinta inay si toos ah ugu soo bandhigaan alaabtooda shabakadda oo ay la soo xiriiraan booqdayaasha.
Tolexo, madasha tafaariiqda e-commerce ee IndiaMart, ayaa noolaa ilaa 2014.
Alibaba, oo lagu aasaasay Shiinaha 1999, waa ciyaartoy muhiim ah oo caalami ahaan loo aqoonsan yahay ganacsiga e-commerce.
Shirkadan e-commerce waa xoog ku jira warshadaha e-commerce adduunka, oo ay leedahay Alibaba Group Holding, oo ah shirkad haysata shirkad weyn oo caalami ah oo ku takhasustay wax kasta oo khadka tooska ah laga bilaabo ganacsiga e-commerce ilaa tafaariiqda internetka, internetka, iyo tikniyoolajiyadda.
Ola Cabs waa adeeg taksi oo khadka tooska ah oo Hindi ah oo xaruntiisu tahay Bengaluru, Karnataka. Waxaa la aasaasay 2011.
Waqtigan xaadirka ah, Ola Cabs waxay leedahay 8288 qof waxayna dakhli ka soo xarootaa $ 110 milyan. Ola wuxuu bixiyaa tagaasida magaalada, cabsida magaalada dhexdeeda, iyo cabsida maxaliga ah baakadaha saacadlaha ah
Snapdeal waa suuq internetka Hindiya ku yaal, oo bixiya alaabooyin u dhexeeya elektiroonig iyo mood ilaa guri iyo qalab ku leh xarunta Gurugram, Haryana. Waxaa la aasaasay 2010.
Waqtigan xaadirka ah, Snapdeal waxay shaqaaleysiisaa 4553 qof waxayna soo saartaa dakhli dhan $ 132 milyan.
Snapdeal waa shirkad ku takhasustay iibsashada khadka tooska ah iyo sidoo kale shirkad gaar loo leeyahay. Rohit Bansal iyo Kunal Bahl ayaa bilaabay Snapdeal.
Myntra Jabong waa tafaariiqle online ah oo Hindi ah oo xaruntiisu tahay Bengaluru, Karnataka. Waxaa la aasaasay 2007.
Asal ahaan, Myntra Jabong waa degel ku takhasusay dukaamaysiga internetka. Myntra Jabong waa shirkad gaar loo leeyahay.
Xilligan, Myntra Jabong waxay shaqaaleysiisaa 4978 qof waxayna dakhli ka soo gashaa $ 62 milyan.
8. Bixinta TM
Paytm waa madal e-commerce oo internetka ah oo Hindi ah oo xaruntiisu tahay Noida, Uttar Pradesh. Waxaa la aasaasay 2010.
Waqtigan xaadirka ah, Paytm waxay shaqaaleysiisaa 9318 qof waxayna dakhli soo gashaa $ 118 milyan.
9. Tilmaamaha Dukaanka
ShopClues, oo u shaqaysa sidii suuq, waxay leedahay jaaliyad sii kordhaysa oo ah ganacsato shahaado haysta oo ku sugan Hindiya.
Si ka duwan aaladaha kale ee wax laga iibsado ee internetka, ShopClues waxay urursatay saldhig ganacsi oo ka badan 3.5 lakhs.
ShopClues waxay sameyneysaa taariikh iyadoo awood siineysa ganacsatada maxalliga ah iyo kuwa gobolka, gaar ahaan magaalooyinka Tier 2 iyo Tier 3, oo ay u rogto ganacsi qaran.
Nykaa waa tafaariiqda quruxda Hindiya oo iibisa waxyaabaha la isku qurxiyo, dharka, iyo alaabooyinka fayoobaanta.
Waxaa la aasaasay 2012 iyada oo ah dukaan elektiroonig ah oo qurux badan oo iibiya alaabada noocyo kala duwan leh.
Nykaa ayaa tan iyo markii ay samaysatay astaantii la isku qurxiyo oo ay dhistay meelo badan oo leben iyo hoobiye ah oo ku baahsan Hindiya.
Halkaan Yepme, waxaad ku damin kartaa harraadkaaga moodada adiga oo ku dhex milma xalka hal-joogsiga ah ee dukaamaysiga tooska ah ee Hindiya.
Iyada oo doonaysa inay kuugu adeegto adiga moodada leh, Yepme waxay abuurtay astaan ​​mooddeed oo u gaar ah, oo leh qaybo aan xad lahayn oo loogu talagalay ragga iyo dumarka, iyo sidoo kale dhar aad u ballaaran oo la jaanqaadaya isbeddellada iyo qaababka cusub.
Infibeam.com waa shirkad teknolojiyad maaliyadeed oo caalami ah oo fadhigeedu yahay Hindiya oo bixisa aalado dhijitaal ah oo isku dhafan oo la miisaami karo sida nidaamka lacag -bixinta dhijitaalka ah ee CCAvenue iyo xallinta software -ka shirkadda ee BuildaBazaar.
Iyaga ayaa ah kuwa kaliya ee si guud looga ganacsado, bootstrapped, faaiido Fintech oo iskaashi la leh faylalka Fintech ballaaran.
Akhri: Dhammaan waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Dukaanka Dukaanka Amazon 2022
2GUD waxay ku bilaabatay sidii dukaan elektiroonig ah oo ku takhasusay alaabta la dayactiray, iyadoo iibinaysa taleefanno kala duwan iyo qalab elektiroonig oo hore loogu soo celiyay xaaladdoodii hore.
Ganacsigaan e -commerce ee Hindiya waxaa bilaabay 2018 Flipkart, oo markii dambe ay heshay Walmart, behemoth tafaariiqda Mareykanka ah.
Hadda waxay ku tartamaysaa qaybo kala duwan, oo ay ku jiraan hab -nololeedka, moodka, iyo qurxinta guriga.
BookMyShow waa shabakadda tikidhada tigidhada ugu caansan Hindiya iyo tafaariiqle.
Tan iyo markii la aasaasay 2007, BookMyShow ayaa koray si ay u iibiso malaayiin tikidhada filimada, dhacdooyinka isboortiga, riwaayadaha, iyo dhacdooyinka kale bil kasta.
BookMyShow wuxuu ka furay Indonesia, Imaaraadka Carabta, Sri Lanka, iyo Galbeedka Indies sababtuna waa caankeeda.
15. Qaylada kowaad
Firstcry waa hormuudka ganacsiga elektaroonigga ah ee Hindiya, oo ka iibiya alaabada kumanaan shirkadood.
Waa madal e-commerce oo takhasus u leh alaabta daryeelka dhallaanka, dharka carruurta, iyo alaabta carruurtu ku ciyaarto.
Badeecadaha Firstcry ayaa hadda laga heli karaa tobanaan goobood oo ku baahsan Hindiya oo dhan, iyada oo ay ugu wacan tahay ballaarinta ay ku yeelatay goobaha la xayeysiiyay.
Naaptol waa ganacsiga ugu weyn e -commerce ee Hindiya iyo kan ugu caansan ee laga dukaameysto guriga. Waxay u iibiyaan hab gaar ah.
Naaptol wuxuu kobcay tan iyo markii la aasaasay bishii Janaayo 2008.
Shirkaddu waxay iibisaa elektaroonigga macaamiisha, dharka, buugaagta, ciyaaraha, iyo alaabada isboortiga, sidoo kale waxay u oggolaaneysaa macaamiisha inay wax bartaan oo isbarbar dhigaan badeecadaha ku saleysan tayada, qiimaha, dib u eegista isticmaaleyaasha, iyo arrimo kale.
1mg waa macluumaad daryeel caafimaad iyo farmashiye online ah.
Tan iyo markii la aasaasay 2015, 1mg waxay bixisaa la -tashiyo onlayn ah, tijaabooyin shaybaar, iyo aqoon caafimaad oo aad u badan si ay si wanaagsan ugu adeegto suuqa Hindiya iyo dadweynaha, iyo sidoo kale soo -booqdayaasha u mara dawada ama badeecadda ku habboon dukaankeeda.
Easemytrip.com waa shirkad e-commerce safar iyo dalxiis oo xarunteedu tahay Delhi, India.
Shirkadan e-commerce waa shirkad socdaal oo ku takhasustay duubista duulimaadyada, boosaska hoteelka, iyo hoteellada tooska ah ee internetka.
Tan iyo markii la aasaasay 2008, waxaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya uguna wanaagsan meheradaha eCommerce ee ka jira Hindiya.
Waqtigan xaadirka ah, Easemytrip waxay shaqaaleysiisaa 360 qof waxayna dakhli ka soo gasho $ 349 milyan.
19. Safarka Clear
Cleartrip, oo la asaasay bishii Luulyo 2006, ayaa hormuud u ahayd hab fudud oo toos ah oo toos ah oo loogu safro iyada oo la siinayo macaamiisheeda khibradda safarka ugu ballaadhan ee suurtagalka ah iyada oo la siinayo abaalmarinnada lagu guuleystay Mobile iyo Desktop.
Waa shirkaddii ugu horreysay ee teknolojiyad safar caalami ah oo ballaadhan oo u oggolaanaysa dadka socotada ah inay ogaadaan oo ay ka qaybgalaan nashaadyada firaaqada ah ee aadka u sarreeya.
Cleartrip waa cayaaryahan weyn oo ku jira ganacsiga eCommerce -ka ee Hindiya iyo Bariga Dhexe, isaga oo kaalinta koowaad galay.
VSS Mani wuxuu bilaabay Justdial Ltd sannadkii 1996. Mumbai, Maharashtra, waa xarunta shirkadda.
Waa mid ka mid ah meheradaha/meheradaha e-commerce ee ugu sarreeya Hindiya.
Waxay bixisaa adeegyo raadin oo kala duwan, sida dalbashada cuntada onlaynka ah, jadwalka ballanta dhakhtarka ee internetka, iibsashada tigidhada filimada onlaynka ah, kaarka/duulimaadka/baska onlaynka ah, dalbashada raashinka onlaynka ah, jadwalka ballanka soo-qaadista dharka ee internetka, iyo jadwalka soo-qaadista khadka tooska ah ee internetka, si aan u xuso dhowr.
PharmEasy waa hormuudka farmashiyaha tooska ah iyo madal daryeel caafimaad ee Hindiya.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka dalbato alaabada dawooyinka iyo daryeelka caafimaadka khadka tooska ah oo laguugu keeno gurigaaga adiga oo kugu xiraya farmashiyeyaasha tafaariiqda ee diiwaangashan.
Kani waa mid ka mid ah bakhaarrada caafimaadka eCommerce -ka ugu fiican oo ka dhigaya iibsashada dawada mid deg deg ah, ku habboon, iyo dhaqaale gudaha Hindiya.
99acres.com, oo ah hoyga 1 -aad ee hantida Hindiya, ayaa la bilaabay 2005 waxayna u adeegtaa dhammaan dhinacyada baahida macaamiisha guryaha.
Waa suuq online ah oo iibsadayaasha, iibiyeyaasha, iyo dillaaliinta/wakiilladu ay si dhaqso leh, wax ku ool ah, oo awood leh ula wadaagi karaan macluumaadka ku saabsan guryaha ma guurtada ah.
Waxaad u adeegsan kartaa 99acres.com si aad kor ugu qaaddo hanti, u raadsato hanti, u baadho guryaha, u samaysato microsite -ka hantidaada, oo aad ula socotid wararka iyo isbeddellada guryaha ee cusub.
HealthKart.com waa bakhaarka caafimaadka iyo jirdhiska ee caafimaadka ragga iyo dumarka ee ugu weyn Hindiya.
Waxaad ka dukaameysan kartaa internetka si aad u hesho ururinta ugu dambaysa ee caafimaadka, jirdhiska, iyo alaabada la xiriirta ee ka timaadda shirkadaha ugu sumcadda badan.
Waa mid ka mid ah meheradaha ugu wanaagsan eCommerce -ka Hindiya waxayna xarun ku leedahay Gurugram, Haryana, India.
Moglix waa shirkad E-ganacsi oo laga aasaasay Aasiya oo ku takhasustay soo iibinta sahayda warshadaha ee B2B, oo ay ku jiraan MRO, Badbaadada, Korontada, Nalalka, Nadiifinta & Ilaalinta Guryaha, Xafiisyada Xafiisyada & Sahayda, Qalabka Awoodda, iyo baahiyo badan oo warshadeed.
Aragtidoodu waxay caddaynaysaa abuurista jawi-ganacsiyeed dhijitaal ah oo gaar ah, oo loo qaabeeyey si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee iibsadayaasha iyo iibiyeyaasha, iyada oo hadafku yahay in la soo koobo farqiga u dhexeeya baayacmushtariyada B2B iyo macaamiisha.
Sidoo kale akhri: Mercari vs Poshmark: oo ah madal e-commerce ugu fiican.
Yatra.com waa wakaaladda socdaalka ee ugu weyn Hindiya. Gurgaon waa xarunta shirkadda.
Dhruv Shringi (Maamule), Manish Amin (CIO), iyo Sabina Chopra (COO - Corporate Hotels) ayaa shirkadda bilaabay 2006.
Waxay kaloo u shaqaysaa mashiinka raadinta safarka. Yatra sidoo kale waxay bilaabaysaa kaarka wax iibsiga ee fasaxa si safarka loo fududeeyo. Waa ganacsi kale oo eCommerce ugu fiican Hindiya.
Travelyaari (mantis Technologies Pvt. Ltd.) waa shirkad Internet oo Hindi ah oo fadhigeedu yahay Bengaluru, Karnataka.
Tan iyo markii la aasaasay 2007, Travelyaari waxay ku takhasustay tikidhada baska onlaynka ah.
Waqtigan xaadirka ah, Travelyaari waxay shaqaalaysiisaa 283 qof waxayna dakhli ka soo gasho $ 8 milyan.
MakeMyTrip, oo ah shirkad safar oo Hindi ah, ayaa caan ku ah joogitaanka shabakadeed ee adag.
Ururku wuxuu bixiyaa adeegyo safar oo aad u kala duwan, oo ay ku jiraan duulimaadyada, baakadaha fasaxa, tigidhada, iyo boos celinta hoteelka.
Waxay kaloo bixisaa xirmooyinka fasaxa dhammaan meelaha loo dalxiis tago. Waxay samaysay barnaamijyadeeda safarka oo la heli karo.
Deep Kalra waxay abuurtay ganacsiga e-commerce ee ugu weyn Hindiya sanadkii 2000. Iyada oo loo marayo xafiisyada Sydney iyo New York City, shirkadu waxay kaloo soo bandhigtay dibedda.
Clovia waa astaanta goonida u ah lugaha, dharka hurdada, dharka qolqolka, dharka firfircoon, iyo qaab-dhismeedka ka mid ah haweenka kunka sano ee magaalooyinka Hindiya.
In kasta oo Hindiya ay tobanaan sano isku dayday inay la jaanqaado noocyada jirka ee adduunka oo dhan, Clovia waxay u dhaqaaqday inay fahanto Hindiya iyo ku habboonaanteeda si ay u siiso xirmooyin raaxo leh oo ku saleysan xallinta haweenka Hindida ah ee ku xannibnaa vanilj iyo ikhtiyaarrada-dharka .
CaratLane.com waxaa la aasaasay sanadkii 2008 iyada oo hadafkeedu ahaa in la qurxiyo dahabka. Oo hadda, toban sano oo sharaf leh ka dib, waxaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah 20-ka ugu sarreeya aaladaha ganacsiga e-commerce ee Hindiya.
CaratLane si joogto ah ayay u koraysay ilaa xoog ilaa iyo bilowgeedii, waxayna hadda leedahay 100 xarumood oo ku baahsan Hindiya.
Netmeds.com waa farmashiye caan ku ah internetka oo ku yaal Hindiya. Daawooyinka la qoro iyo kuwa aan dhakhtar qorin waxaa lagu dalban karaa internetka.
Bishii Juun 2015, shirkaddan dawooyinka onlaynka ah ee khadka tooska ah ku leh Chennai oo diiradda saareysa ganacsiga daryeelka caafimaadka ayaa la sameeyay.
Waa mid ka mid ah ganacsiga/ shirkadaha e -commerce ee ugu wanaagsan Hindiya
Maxay yihiin saddexda nooc ee kala duwan ee e-commerce?
Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), iyo Mobile Mobile waa saddexda qaybood ee eCommerce (M-Commerce).
Waa maxay mustaqbalka eCommerce -ka Hindiya?
Sida laga soo xigtay cilmi -baaris cusub, iibinta eCommerce -ka tafaariiqda ee adduunka ayaa garaaci doonta rikoorka ugu sarreeya 2021. Laga soo bilaabo $ 1.3 tiriliyan 2014 ilaa $ 4.9 tiriliyan 2021, shirkadaha eCommerce waa inay filayaan koror boqolkiiba 265 ah.
Waa maxay shirkadda ugu weyn eCommerce -ka adduunka?
Amazon waa shirkadda ugu weyn eCommerce ee adduunka.
Immisa ayay ku kacaysaa in laga bilaabo meheradda eCommerce -ka Hindiya?
Hindiya, bilaabista meheradda eCommerce waxay u baahan tahay maalgelin ugu yar oo ah 5 illaa 10 lacs.
In kasta oo internet-ka Hindiya iyo deegaanka e-commerce ay leeyihiin boqolaal milyan oo isticmaale, haddana wali waa curdin.
Waxaa jira meelo badan oo koritaan ah oo ku yaal suuqa Hindiya maxaa yeelay wali waxay u soo baxaysaa farsamo ahaan. Si kastaba ha ahaatee, tartanku durba waa mid aad u daran, iyada oo ganacsiyo badan oo maxalli ah iyo kuwo caalami ahba ay u hanqal taagayaan qayb ka mid ah warshadan sida xawliga ah u koraysa.
Waa kuwan hoggaamiyeyaasha ganacsi ee ugu wanaagsan ee aaladaha ganacsiga e-commerce ee Hindiya sanadka 2021 si ay kuu siiyaan faham wanaagsan oo ku saabsan xaaladda tartanka suuqa ee nidaamka deegaanka e-commerce ee Hindiya.
gloify.com -Sida loo bilaabo Tallaabada Ganacsiga E-commerce ee hagaha Tallaabada ee 2021
ibef.org -Warshadaha E-commerce ee Hindiya
Inc42.com - Iyada oo ay jirto Baadhitaan Xoogan iyo Tartanka, Amazon India ma ka Faa'iidaysaa wax kasta?
Nextbigwhat.com - Immisa ayey ku kacaysaa in laga bilaabo shirkad eCommerce oo aasaasi ah gudaha Hindiya?
Disfold.com -10ka goobood ee ugu sarreeya e-commerce ee Hindiya 2021
Easyleadz.com -70-ka shirkadood e-commerce ee ugu sarreeya Hindiya
Dib -u -eegista AliExpress 2022: Ma Xalaalbaa Mise Dukaan Online
Funaanadaha Naqshadaynta ee La Iibiyo | 13 Shirkadood oo lacag badan ku siiya 2022
10 -ka Duuliye ee Diyaaradaha Diyaaradaha ugu Mushaharka Badan | 2022
Sida Loo Bilaabo Meherad Utah sanadka 2022: Tusaha Tallaabada-Ugu-dambaysa ee Ugu Dambeeya
Adeegga gaarsiinta ayaa ah mid ka mid ah shaqooyinka ugu waaweyn ee aadka loo raadinayo waqtiyadii ugu dambeeyay,…
25+ Ganacsiyada Yar Yar ee Ugu Faa'idada Badan 2022 | Talada Khabiirka
Tan iyo markii uu dillaacay masiibada, wax badan ayaa loo baahan yahay in la meel dhigo marka ganacsi cusub…